Duulimaadyo cusub oo ku socda Las Vegas oo ka imanaya San Jose, Boston, Orlando iyo Fort Lauderdale ee United Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyo cusub oo ku socda Las Vegas oo ka imanaya San Jose, Boston, Orlando iyo Fort Lauderdale ee United Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadyo cusub oo ku socda Las Vegas oo ka imanaya San Jose, Boston, Orlando iyo Fort Lauderdale ee United Airlines.
United Airlines waxay u duuli doontaa 81 duullimaad Las Vegas inta lagu jiro maalmaha imaatinka ugu sarreeya ee Janaayo 3-4, iyo 109 duullimaad maalmaha ugu sarreeya ee bixitaannada ee Janaayo 8-10.
Marka loo eego sahan dhowaan lagu sameeyay macaamiisha ganacsiga United, ku dhawaad ​​20% waxay yiraahdeen waxay filayaan safarka shirarka iyo shirarka inay dhaafi doonaan heerarkii cudurka kahor 2022.
Intii u dhaxaysay Oktoobar 27 iyo Noofambar 9, raadinta bogga United ee duulimaadyada Las Vegas inta lagu jiro CES 2022 waxay ahaayeen 70% marka la barbar dhigo labadii toddobaad ee ka horreeyay.
United Airlines waxa ay ku dartay 80% awooda ay u samaysay CES sanadka 2020, taas oo muujinaysa in safarka ganacsigu uu dib u soo laabanayo.
Iyadoo laga jawaabayo jawaab celinta macaamiisheeda ganacsi iyo kor u kaca baahida, United Airlines waxay balaadhinaysaa jadwalkeeda si ay ugu fududayso ka qaybgalayaasha CES 2022 inay ku soo biiraan bandhigga shakhsi ahaaneed Las Vegas. Shirkaddu waxay ku dartay 14 duullimaad oo toos ah horraantii Janaayo inta u dhaxaysa Las Vegas iyo San Jose, Calif., Boston, Fort Lauderdale, iyo Orlando, waxayna sidoo kale ku daraysaa 30 duulimaad oo ka imanaya garoomadeeda xudunta u ah ee San Francisco, Los Angeles, New York/Newark , iyo Washington DC/Dulles. Tani waxay ka dhigan tahay kororka awoodda 37% marka loo eego jadwalkeeda caadiga ah ee Janaayo ilaa Las Vegas.
"Soo noqoshada shirar shaqsiyeed iyo dhacdooyin ayaa calaamad aad u wanaagsan u ah soo kabashada masiibada, United-na waxay si gaar ah u taagan tahay inay ka faa'iideysato kororka baahida," ayuu yiri Ankit Gupta, madaxweyne ku xigeenka sare ee Qorsheynta Gudaha iyo United Express. "Waxaan ku kordhineynaa 80% awooda aan u sameynay CES sanadka 2020, taasoo muujineysa in safarka ganacsigu uu dib u soo laabanayo, macaamiisheenana ay aad u xiiseynayaan inay dib ula midoobaan macaamiisha iyo asxaabta."
Inta u dhaxaysa Oktoobar 27 iyo Noofambar 9, raadinta United Airlines website loogu talagalay duulimaadyada ku socda Las Vegas Intii lagu jiray CES 2022 waxay kor u kacday 70% marka la barbardhigo labadii toddobaad ee hore. Iyo sida lagu sheegay sahan dhowaan lagu sameeyay macaamiisha ganacsiga United, ku dhawaad ​​20% waxay yiraahdeen waxay filayaan safarka shirarka iyo shirarka inay dhaafi doonaan heerarkii cudurka kahor 2022.
United Airlines duuli doona 81 duulimaad Las Vegas inta lagu jiro maalmaha imaatinka ugu badan ee Janaayo 3-4, iyo 109 duulimaadyada maalmaha ugu badan ee bixitaan ee Janaayo 8-10.
Duulimaadyada cusub waxaa ka mid ah:
8 duulimaad toos ah oo ka imanaya San Jose, California
6 duulimaad toos ah oo ka imanaya Fort Lauderdale, Boston iyo Orlando
15 duullimaadyo dheeri ah oo ka yimid San Francisco, iyo 9 duullimaad oo diyaarad weyn ah
8 duullimaadyo dheeraad ah oo ka imanaya Los Angeles, iyo 4 duullimaad oo diyaarad weyn ah
5 duullimaadyo dheeraad ah oo ka imanaya Washington DC/Dulles
2 duulimaad oo dheeraad ah oo ka imanaya New York/Newark